महिलालाई सन्तुष्ट पार्न कति समयसम्म यौनसम्बन्ध राख्नुपर्छ ? यौन जिज्ञासा ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
महिलालाई सन्तुष्ट पार्न कति समयसम्म यौनसम्बन्ध राख्नुपर्छ ? यौन जिज्ञासा !
प्रकाशित मिति १४ असार २०७५, बिहीबार १४:२१ लेखक nepali janta
काठमाडौं । यौन हाम्रो समाजमा लाजको कुरा भएकाले अझै खुलेर कुरा गर्ने गरिँदैन । चिकित्सकसँग पनि लाज मानेर मनमा लागेका सबै कुरा खोल्ने कोही चाहदैनन् । तर, यही विषयलाई लिएर मनमा अनेक भ्रम पाल्नेहरु जताततै भेटिन्छन् । यौनसम्बन्धि धेरैको दिमागमा रहने गरेका केही प्रश्न र तिनीहरुको उत्तर यस प्रकार छ।
के दुब्लो मान्छेलाई बढी सेक्स चाहिन्छ ?
दुब्लोलाई सेक्स बढी चाहिने र मोटोलाई कम चाहिने भन्ने भ्रम पनि छ। तर, यसमा कुनै सत्यता छैन। चिकित्सकका अनुसार स्वस्थ मानिस मोटो या दुब्लो जे भए पनि, उसले सेक्सको भरपूर आन्नद लिन सक्छ। कसैलाई स्लिम केटीहरू सेक्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा। यो व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने कुरा हो। त्यसैले मोटा जति सबै सेक्स नै नगरी बस्छन् भन्ने होइन। बाटोघाटोमा मोटो मानिस देख्नेबित्तिकै यसले कसरी सेक्स गर्ला भनेर हाँसो गर्नेहरू ठूलो भ्रमको शिकार भएका हुन्छन्। पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी सेक्स चाहिन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। हरेक व्यक्तिको यौन चाहनाको मात्रा फरक–फरक हुन्छ। महिलालाई बढी र पुरुषलाई कम भन्ने कुरा आउँदैन। तर, सुगर, ब्लडप्रेसर या डिप्रेसनजस्ता रोग भएकाहरूलाई सेक्स चाहना कम हुन्छ।
महिनावारीमा सेक्स गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
महिनावारी भएको बेला सेक्स हाम्रो समाजमा वर्जित छ। रजस्वला भएकी महिलालाई छुनै हुँदैन भन्ने मान्यता अहिले पनि प्रबल छ। तर, यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क गर्नुहुँदैन भन्ने केही छैन। चिकित्सकका अनुसार रजस्वला भएको बेला महिलामा यौन चाहना झन् बढेको हुन्छ। यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले बढी चरमसुख पाउन सक्छिन्। योनीबाट धेरै नै रगत बगेको छ र रगत देख्दा घिन मान्नेहरूले यौन सम्पर्क गर्न सक्दैनन्। ‘मनमा अलिकति पनि शंका उब्जिएका बेला यौन सम्पर्क गर्दा रमाइलो नहुने भएकाले मनबाट सबै शंका हटेको खण्डमा यस्तो अवस्थामा ढुक्कसँग यौन सम्पर्क गर्दा हुन्छ । लिंगमा कुनै संक्रमण छ भने चाहिँ कन्डम प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो हो।
रक्सीले सेक्सको अवधि बढाउँछ ?
मदिराको मातमा सेक्स गर्दा दिव्य आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास भएका धेरै छन्। यो सरासर गलत हो। ठिक्क पिएको अवस्थामा कसैको मनको संकोच हटाउन रक्सी सफल भए पनि यसले सेक्सलाई गतिलो या भव्य बनाउँछ भन्ने होइन। रक्सी खाएपछिको सेक्सका तीनटा चरण हुन्छन्। डा। बद्री गौतमका अनुसार ठिक्क रक्सी खाएको अवस्थामा यसले संकोच हटाएर यौन सम्पर्कका लागि तयार पार्न मद्दत गर्छ। तर स्खलनको अवधि बढाउने चाहिँ होइन। रक्सी खाएपछि लिंगको संवेदनशीलता हराउँछ र योनीभित्र लिंग प्रवेश गराउँदा धार फर्केको भुत्ते खुकुरी मासु थुंगेजस्तै हुन्छ।
काठमाडौँ । नेपाली तयारी पोसाक (रेडिमेट गार्मेन्टस)मा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन संयुक्त राज्य अमेरिका सकारात्मक देखिएको छ ।
रुपन्देहीमा दुई युवतीमाथि १४ जनाले गरे सामूहिक बलात्कार
रुपन्देही । रुपन्देहीमा दुई युवतीमाथि १४ जनाले सामुहिक बलात्कार गरेको खुलेको छ । गैडहवा गाउँपालिकाका दुई युवतीलाई यही असार…
विगतको पोल खुल्ने डरले गोरेलाई भगाइयो
काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौलाले विगतमा गरिएका सुन तस्करीको पोल खुल्ने डरले गोरेलाई भगाएको गृहका सहसचिव पौडेलको…
शुल्क फिर्ताको माग गर्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी रिले अनसनमा
बुटवल । सरकारले तोकेभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्तालगायत ६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस…
भूकम्प पीडितलाई दोश्रो किस्ता रकम लिने समय असारसम्म थप
काठमाडौं । सरकारले आवास निर्माण गरिरहेका भूकम्प पीडितहरूलाई दोश्रो किस्ताको रकम लिने समय थप गरेको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको…
सिम्रनलाई २० वर्षको यात्रामा कतिलाई सिकाए भन्नेसम्म याद छैन । तर, उनले सिकाएका धेरै विद्यार्थी अहिले प्रशिक्षक भएर आफूसँग…